Canab | January 2020
Waxaa laga yaabaa in aaggaaga jiilaal aad u dheer iyo heerkulbeegga kuleylka ah inta badan jiilaalka badanaa calaamada markasta -20, laakiin tani ma yeelato si ay u beertaan beertii canabka ahayd, iyo talooyinkeena, waxay koraan beergooyska qorraxda qorraxda. Noocyada nooca caleemaha ah si ay u koraan kuwa bilawga ah ee safka dhexe Dabcan, canab waxay ku koraan inta badan xagaaga xagaaga.
Canab, guud ahaan, waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid adag oo sahlan in lagu beero warshad. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira cayayaanka iyo cudurrada halis u ah isaga. Sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo horeyba dhibaatooyinka suurtagalka ah, oo ay yaqaanaan cayayaanka ugu caansan. Ma taqaanaa? Daraasad cilmi baaris ah oo ay sameeyeen saynisyahannadu waxay muujinayaan in goosashada caleenta laga soo jaray sannadkiiba ugu yaraan hal saddexaad, iyo haddii ay dhacdo in ay ku guul daraysato qaadashada tallaabooyin habboon si looga hortago cudurada, khasaaruhu wuxuu gaari karaa nus nus oo dalagga ah.
Cudurada canab ah - khatar weyn ku ah dhirta. Noocyada ugu macaan badan iyo kuwa waaweyn ayaa weli ah kuwa ugu nugul iyaga, inkastoo shaqada ay tahay midda xoolaha. Sidaa darteed, si aad u hesho goosashada wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo daweeyo canab cudurada. Ma taqaanaa? Canab - dhirta kaliya ee adduunka oo daraasadda sayniska gooniya - dillaac.
Bannaanka u badan oo jecel inay koraan canab on sirqoolladooda. Waxaa lagu qaddariyaa sifooyinka wanaagsan iyo dhadhanka aan dhammeysnayn. Si kastaba ha noqotee, dalagga dalagga waxaa laga yaabaa inuu halis ku jiro haddii dhirta uu saameeyo cayayaanka. Inta badan caleemaha waxaa lagu soo weeraray cuncun, oo loo yaqaano cayayaanka canabka. Markaad qaadsiinaysid, waxaad lumi kartaa ilaa 30% dalagga, iyo haddii aadan daaweynin waqtigaa daaweyn, waxaad lumin kartaa ilaa 50%.
Canab waa beer dalag, oo inta badan ku koraya cimilada diiran. Laakiin qaar ka mid ah noocyada canabka ah ayaa si guul leh u qaadanaya xidid dhexdhexaad ah iyo xataa waqooyiga. Guusha cagaarka sii kordhaya waxay ku xiran tahay arrimo badan, mid ka mid ah waa gabbasho waqti go'an. Dalag canab ah xilliga gu'ga: faa'iidooyinka iyo faa'iido-darrida Waxaa ku filan in la galo su'aalaha "manjooyin canab ah guga" bilowga guga ", waxad heli doontaa tilmaamo badan oo sawirro ah, qaab muuqaal ah iyo wixii la mid ah.
Hadda, celcelis ahaan 100 sentar oo canab ah ayaa laga goostay hal hektar oo ah beerta canabka ah. Xitaa ka hor madax-bannaanida Ukraine, sawirkani wuxuu ahaa 3 jeer ka yar - qiyaas ahaan 30 c / g. Tani waxa ay sheegtay Viktor Kostenko, madaxa waaxda horumarinta beeraha, viticulture iyo winemaking ee Waaxda Beeraha ee Wasaaradda Siyaasadda iyo Siyaasadda, inta lagu guda jiro wareysiga mid ka mid ah kanaalada TV-ga.
Mid ka mid ah cadaawayaasha ugu khatarsan ee canabkiisa waa cayayaanka cudurka fungal. Bannaanka u badan ayaa isku dayey in ay la dagaallamaan cudurkan in ka badan darsin sano, laakiin qof kasta ma guuleysto. Aan eegno sababaha muuqaalka cudurka oo aad ogaatid sida loola macaamilo. Tilmaamaha iyo halista cudurka Jilicsanaan (ama caaraddo yaryar) - mid ka mid ah halista ugu badan ee fungal ee noocyada canabka ee Yurub.
Caleemaha canabka ah ee Chardonnay waa mid caalami ah, maadaama ay ku kori karto aag kasta oo cimilada ah iyo soo saaro dalagyo badan. Waxaa intaa dheer, khamriga laga soo saaro "Chardonnay" ee waddammo kala duwan ayaa ku riyaaqaya dhadhankiisa gaarka ah. Homeland iyo asal ahaan kala duwan ee canabki "Chardonnay" Xilligan, aqoonyahaniintu si cad uma qeexi karaan taariikhda noocyada kala duwan.
Beeridda beeraha ee sabiibta canabka: beerashada iyo daryeelka
Kishmish waa magac guud oo loogu talagalay tiro badan oo kala duwan oo ah noocyada kala duwan ee canab, kala-goyska yar iyo dhadhanka macaan ee berry, iyo sidoo kale maqnaanshaha abuurka iyaga ku jira. Waqtigan waa in la tixgeliyaa marka la dooranayo canabki sabiib ah ee lagu beeray goobta, tan iyo beerashada xayawaan ee canab, sabuunta dhadhankiisa iyo astaamaha daryeesha dhirta si aad u kala duwan ayaa ku xiran hadba noocyada kala duwan.
Maantana waxaan ka hadli doonaa sida biyaha iyo quudinta canabku guga. Milkiilayaal badan oo ku hawlan beerashada canab toban sano, waxay u caanbileeyaan daryeelka qaarkood ee geedka canabka ah. Si kastaba ha ahaatee, cimiladu waa isbeddelaysaa, xaaladaha cimiladu waxay la wadaagaan la'aanta baahida nafaqooyinka ah ee yareeya dhalidda dalagga iyo "abaalmarinta" canab leh cudurro kala duwan.
Geedka canabku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daryeelidda dhirta. Waxaa si gaar ah muhiim ugu ah gobollada xagaaga oo gaaban yahay, canabku ma helayaan qorraxda ku filan si ay ugu fiicnaato. Miyuu suurtogal ah in la isku xoqo canab xagaaga? Faa'iidada aan la iska qaadin ee canabkiisa manjooyinka xagaaga waa in geeddi-socodkani uu ka caawiyo in si weyn loo kordhiyo tirada iyo hagaajinta tayada dalagga.
Maanta, waxaa jira noocyo badan oo khamri ah noocyo kala duwan oo berry ah. Laakiin kuwa ugu caansan weli waa khamri canab. Waxaan ka hadli doonaa nooca canab ah ee la dooranayo iyo sida loo sameeyo cabitaan dhadhan fiican leh oo ku jira maqaalkan. Waa maxay noocyada kala duwan ee canabka si aad u doorato Si aad khamri uga samaysato canab guriga, waxaad dooran kartaa gabi ahaanba noocyada kala duwan ee warshadan.
Sida loola tacaalo oidiyoon oo canab ah
Canab, sida dhirta kale ee beeraha, waxay yeelan karaan cuduro kala duwan. Waxay infekshinayaan caleemaha, ubaxyada, taas oo ay waxyeeleyso geedka. Oidiyum (magac kale ayaa ah xagta ujuurada budada ah) waa cudur halis ah. Maqaalkani waxaan ka wada hadli doonaa oidiyoonta canabkiisa: tixgeli daaweynta cudurkan, iyo sidoo kale kala hadal habka ugu wanaagsan ee lagu maareyn karo dhirta.
Canab - caleemaha dhirta ee qoyska Vinogradovye, oo leh in ka badan 70 noocyada, sii kordhaya inta badan qaybaha cimilada. Kala duwan "Xusuusta Dombkovskoy" dhadhan wanaagsan oo miro iyo midabyo badan oo berry ah. Taariikhda xulashada canab ee "Xusuustii Dombkovskaya" waxaa laga xoreeyey Orenburg Shatilov Fyodor Ilyich ilaa soddon sano ka hor.
Dhawaan, geedka "Julian" ayaa si weyn u caan ah sababtoo ah tayadiisa, iyo geedaha iskiis u kobcaya ee kala duwan ee noocaan ah waa kibirka wax dhirta. In this article waxaan ku baran doonaa canab "Julian" - sharaxaadda iyo xeerarka daryeelka ee kala duwan, sawir. Taariikhda Kala duwan ee noocaas ah waxaa lagu dhaliyey by breeder hiwaayadda V.
Ma inaan daryeeli karaa canab inta lagu jiro ubax?
Muddada go'aamisa tayada goosashada xiga waa ubaxa canabkiisa. Aad ayey muhiim u tahay in laga fogaado dhibaatooyinka wajigan ah ee horumarinta dhaqanka. Haddii aysan jirin wax suurtagal ah oo saameyn ku yeelan kara xaaladaha cimilada, markaa waa lagama maarmaan in la sameeyo waxa ku xiran gacanta gacmaha. Faahfaahinta iyo sifooyinka mudada Marka canabku ku jiro ubaxyada, xaaladaha heerkulka, heerka qoyaanka, iyo sidoo kale daryeelka beerta ee dhaqan ahaan waa muhiim weyn.